China Wholesale Ihowuliseyili Glass Kubalulekile Oil Square iibhotile mveliso kunye nabathengisi | Jiamei
Ihowuliseyili Iglasi ngaphaya elubalulekileyo Iibhotile Square Square
Amandla: 15ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Isicelo: Ukugqibezela ukulayisha ioyile ezahlukeneyo, njengeoyile ehlanganisiweyo, ioyile yemifuno, isitshixo, isiqhumiso, ioyile yokuthambisa njl.
Izibuko: Lianyungang, Shanghai, Ningbo
Intlawulo: T / T.
Igama lemveliso Iglasi yesikwere iibhotile zeoyile ezifanelekileyo
Umthamo 10ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Intlawulo T / T.
Ukusetyenziswa Iibhotile zeoyile eziyimfuneko
Inkonzo isilika screen, bexhentsa eshushu, frosting, ileyibhile, umbala yoshicilelo kunye nezinye iinkqubo
Ibhotile yeoyile esulungekisiweyo iyathandwa luluntu ngenxa yoyilo lwayo olwahlukileyo. Yahlukile kwisilinda yemveli kwaye inemilo eyahlukileyo.Uthelekiswa nobume be-cylindrical, imilo yesikwere sebhotile yeoyile ijongeka imile ngakumbi, ayibangeli ukudinwa okubonakalayo koluntu.Kodwa iseluhlobo lwebhotile yeoyile ebalulekileyo. inokugcina iioyile ezifanelekileyo, iziqholo, ioyile yokuthambisa kunye nolunye ulwelo.Igcina iioyile zakho ezifanelekileyo zikhuselekile, ukuze zingachaphazeleki zioyile ezinamandla njengeoyile yethanger.Yenziwe ngeglasi.Ukuba ugqibile ukusebenzisa ulwelo lwantlandlolo, Uyilo olunokuphinda lusebenze lwenza igalelo elikhulu ekukhuseleni indalo.
Umbala wayo ucacile kwaye ungabonakalisa ukukhanya kwelanga, ngoko ke kuhle kakhulu.Iinkcukacha zeebhotile zeoyile eziyimfuneko zii-15ml, 25ml, 35ml, 50ml kunye ne-100ml. Olu luyilo lukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zabathengi, kodwa nezakho Ubomi bongeza ukonwaba okuninzi kunye nokunciphisa iintlobo ezahlukeneyo zenkathazo.Obunye ubungakanani bulungele ukuphatheka, ngokulingana ngokufanelekileyo kwisipaji sakho, ezinye zilungele ukusetyenziswa kwasekhaya, ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho lwakho.
Sinezikrini zesilika, ukunyathela okutshisayo, ukuqhwalela, ileyibheli, umbala wokuprinta kunye nezinye iinkqubo, ukuze sikwazi ukwenza ii-logos ezahlukeneyo kunye neepateni ozifunayo.Sinokwenza ngokwezifiso i-logo efanayo nawe ngokomfanekiso wokuqala owawunikezile. Isikwere ibhotile yeoyile entle ineentlobo ngeentlobo zeendlela, imisebenzi epheleleyo, unokukhetha isiciko ngokweemfuno zakho. Ewe, iimveliso zethu zikumgangatho ophezulu, unokuqiniseka ukuba ulwelo aluzukuvuza.
Into oyifunayo unokunxibelelana nenkonzo yabathengi, siya kukukhonza ngentliziyo yonke.
Egqithileyo Iibhotile ze-roller zeoyile eziyimfuneko ezinemibala ye-5ml ngebhotile yeglasi yokuthambisa enesiciko sealuminium
Okulandelayo: Ihowuliseyili Green Amber Glass kubalulekile ukuba oyile Ibhotile